European yekufambisa mubatanidzwa inoda mashoma mashandiro ekushanda mukati meLufthansa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » European yekufambisa mubatanidzwa inoda mashoma mashandiro ekushanda mukati meLufthansa
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
European yekufambisa mubatanidzwa inoda mashoma mashandiro ekushanda mukati meLufthansa Boka
Nechisimba, vese vashandi nevashandirwi vanofanirwa kubuda mudambudziko iri pamwe chete, uye nekudaro tinofanirwa kuita hurukuro yemagariro nekukurumidza kuti tione kugadzirwa kwakanaka kwezvimwe zvinhu zvitsva uye shanduko kuburikidza nechero shanduko inodiwa maitiro nekuenzanirana uye kuvhurika pakati peakadai hurukuro.
Mibatanidzwa inoda mwero wekushanda wakadzikama mukati meLufthansa Group.
Maitiro epasi emamiriro ekushanda anotyora kodzero dzevashandi.
Kukwikwidzana kwemukati mukati meLufthansa kunogona kugadziriswa nekusimbisa zvibvumirano.
Kutsanangura iwo mashoma masisitimu emamiriro ekushandira kune vanhu vanoshanda munzvimbo dzese dzeLufthansa Boka ndiyo nhanho yekutanga yekumisa zviitiko zvinoraswa zveveruzhinji izvo kambani yemhepo yeGerman inonyadzisa, asi ichiziva, ichitsungirira kunze kwevatakuri venzvimbo huru.
Mutsamba ichangoburwa yakanyorerwa Sachigaro weDeutsche Lufthansa, VaCarsten SPOHR, iyo European Kutakura Vashandi 'Federation (ETF) inoshora '' yakaderera magariro nemabasa evashandi '' maitiro, ayo Lufthansa Boka manejimendi anoramba achishandisa zvine hungwaru mune yayo Eurowings Tsvaga mashandiro. Boka rinotenda kuti zviito zvakadaro ndiyo chete mhinduro yekukasira uye inogoneka yekusangana nematambudziko ezvehupfumi emusika, izvo zvinorambwa ne ETF.
Sekureva kwevanobatana neEFF - Kapers (Switzerland), Vida (Austria), Aircrew Alliance uye ver.di (Germany) uye B.United (Czech Republic) - mhinduro iyi iri kugadzira chinonzi "boka remunhu rinodya vanhu", uye inotsigira mujaho kusvika pasi nzira. Zvichakadaro zviyero zvepasi zvemamiriro ekushanda zvakatemerwa kusvika pari zvino nendege zhinji dzinodhura muEurope dzinotyora zvakanyanya kodzero dzakakosha dzevashandi, uye boka riri kumhanyisa kutenda kwakafanana. Ichi ndicho chikonzero iyo European Transport Workers Federation uye vanobatana navo zvisingaiti vanokumbira iyi modhi kuti isatariswe sepuratifomu yezvinhu zvitsva, senge zviri muEurowings Discover, kambani nyowani yendege iyo yakatanga kushanda mukati meLufthansa Group yekupedzisira mwedzi.
Panzvimbo iyoyo, isu tinofunga kukwikwidzana kwemukati mukati meLutfhansa Group kunogona kugadziriswa nekumisikidzwa kwezvibvumirano pamwe chete paEurowings Discover, uye iyi yekumisikidza modhi inofanira kubva yaenderera mberi kuitiswawo kune ese maEuropean mashandiro. Mibatanidzwa inomiririra vashandi veLufthansa Boka uye iyo ETF - inomiririra mamirioni mashanu evashandi vekutakura mukati meEurope nekupfuura - vane pfungwa yekuti danho rekutanga munzira iyi raizove:
kutangazve hurukuro yemagariro mune vese vatakuri uko izvi zvisingaite, kusanganisira Eurowings Discover uye
kutsvaga nzvimbo yakajairika yekumisikidza yakaderera zviyero zvine chekuita nemamiriro ekushanda kwezviuru zvevashandi veLufthansa Boka izvo parizvino vasina chibvumirano chakabatana.
Eoin Coates, Musoro weAviation pa ETF anoti:
'' Zvakakosha, vese vashandi nevashandirwi vanofanira kubuda mudambudziko iri pamwe chete, uye nekudaro tinofanirwa kupinda munhaurirano yemagariro nekukurumidza kuti tione kugadzirwa kwakanaka kwezvimwe zvinhu zvitsva uye shanduko kuburikidza nechero shanduko inofanirwa kuita nekuenzanirana uye kuvhurika pakati zvekukurukurirana kwakadai. ''
ETF nevaya vanobatana navo mukati meLufthansa Boka vanokumbira manejimendi zvikwata zvemakambani endege ese ari kushanda mukati meLufthansa Group kuti vatangezve nhaurirano yemagariro nemasangano anomiririra nenzira yakabatana, inoshanda uye yekusingaperi. Ichi chingave chiratidzo chakajeka chekuti Lufthansa Boka riri kutora matanho akasimba ekuchinja nzira isiri iyo iyo boka iri kutora nekufunga kudzikisira zvimiro zveveruzhinji nevevashandi vevashandi vayo mumakambani matsva.